Umhla My Pet » Indlela Thetha ezimdaka kwindawo UbuDlelwane
uthando & isini
ngokuthi Jennifer Finney
Indlela Thetha ezimdaka kwindawo UbuDlelwane
ukubuyekezwa: Jun. 30 2020 | 2 min ukufunda
Sinayo yonke izibini kubonwa thetha mdaka eshukumayo, TV kwaye uyifunde ezincwadini kodwa ngaba wo? Kwaye okona kubaluleke kakhulu, ukuba zazise ntetho angcolileyo kulwalamano lwakho?
Ngokwahlukileyo kwingcamango, xa ethetha zimdaka awunalo ukuthi into ezinga okanye ngaphandle khona ukuze ufumane isiphumo esinqwenelekayo. Ngokulandela iingcebiso ngezantsi, ungadibanisa zest kulwalamano lwakho nobomi zesini ngoxa e wena.
ukongeza Spice: Kanye ubulawu ukongeza incasa ukuba ukupheka, nentetho elimdaka wongeza incasa kubudlelwane. nokuba, akuyomfuneko ukuba ulumke nentetho zimdaka kakhulu, nje bulawu kakhulu, uya itya Unga kunokulonakalisa ulwalamano lwakho. Ukongeza ngobumnandi, zama ukuyisebenzisa ngokuvimba ngaloo ndlela uya kuba umdla okungalindelekanga kwaye lonke ixesha usenza thetha mdaka iqabane lakho.
Hlala Ikhululekile: Incam ibalulekileyo kukwenza bathi oko bakholisekile. Nokuba akusihloneli okanye ngokungangqalanga, xa zingemnandanga kakhulu esithi ke ngoko mhlawumbi oko kuya kuvakala nzima kakhulu. Kwaye unyaniseke ngokugqibeleleyo, kukho izinto ezimbalwa kubi ngaphezu uthethe zimdaka kunzi-.
Yiba ngokungangqalanga: eCacileyo, kakubi, sexy, nantetho emdaka graphic uluncedo olukhulu lokulala njengoko kunokukhokelela ngesondo ndiyazingca. Kodwa ukuba ngokungangqalanga xa ethetha zimdaka, uya kufumanisa ukuba uya ukwenza isiphumo ngamandla ebezifuneka njengoko yenza ngokwesondo ukongeza ekwenzeni iqabane lakho soloko ndicinga ngawe. ukuba ezingaqondakaliyo, inyaniso, ndingekawuboni kuba namandla ngakumbi ecacileyo xa ethetha zimdaka.
Enye into ebalulekileyo kwintetho ezimdaka ezingaqondakaliyo kukuba onokuyenza loo nto kanye malunga naphi. Ukusuka iqela ejinga kunye nabahlobo ukuze emsebenzini, obulula “Ndinqwenela abanye aba abantu abazange ngeenxa nje ezinye izinto onwabisayo engqondweni ukuba ndifuna ntoni kuwe”, iya kumshiya iqabane lakho emangalisiwe ngento kanye ngaba kufuneka engqondweni.
eCacileyo, lokulala kwintetho: Nangona eli cebo sisichasi ngqo ukusuka ngentla, ntetho ezimdaka graphic uya kwenza malibaswe ngesondo, umdla kakhulu, yaye uyakuthanda kakhulu – kanye umntu angafuna kwigumbi lokulala. Musa ukuvumela ilizwi ayiqhube ohamba kude kulo yokudlala, sexy lokulala kwintetho. Nje sibe kumgibe mzuzu kwaye echaza ukuba uziva ngathi “uzive ngaphakathi kakuhle ngam”, kukubuyisa iqabane lakho nje kuphela kodwa kurajwa ukuzingca kwakunye. Ukuba nangoku uziva novalo okanye bene-, iqina ngakumbi “hi”, “yeah”, kwaye “Oh Thixo” kwakhona ukunika isiphumo esifanayo.
Erotica: Mhlawumbi kwincam ilula kukuba ukufunda erotica okanye romance iinoveli. Kuphela baya ukwandisa ethetha lweentlobo zakho zimdaka, kodwa uya kuninika iimbono ezininzi iimeko, Dlala indima, kwaye imigca ukongezelela esishiya wajika ingakumbi emva kokuba ugqibile ukufunda sisiganeko lwa-.
Enoba beninam neqabane lakho iinyanga ezimbalwa okanye iminyaka elishumi, ukuthetha ukungcola hlaziya kwaye udlamko, ngokudibanisa yonke kwiqondo elitsha ulwalamano lwakho.
Ngaba Chola amahlakani ezingalunganga?
Indlela ungasondeli emfazini Online - Ukusuka imbono yebhinqa
3 Tips ukunenza Egqibeleleyo Chick Magnet!
Indlela Ukuthandana Intombazana Ecela Unomsa Little
5 Izizathu Kutheni Breakfast First Imihla Ingaba Lokukulu